Kutenda, squidoo! (Shoemoney cherekedza) | Martech Zone
Muvhiki ino ndakavhundutswa nevamwe pachena blog blog spam ... iyo yekuenda URL yaive chaizvo a Squidoo lens. Kana paine munhu mumwe chete mukondinendi iyi asingakwanise kumira Spam, zvingangoita Seth GodinMuvambi Mvumo Kushambadzira uye muvambi weScidoo.
Tarira kune Spammers: Squidoo ingangove isiri nzvimbo yakanakisa yekumisikidza shopu.
Chero zvadzo, ini ndakangodonhedza squidoo chinyorwa chakanaka chekuti ndakaongorora lens iri mubvunzo uye ndikanzwa paine spammer mubhodhi. Nhasi (ndiMuvhuro), ini ndagamuchira tsamba yemutsa kubva kuchikwata cheScidoo kuti vakatarisa lenzi dzenhengo uye zvaive pachena kuti yaive yekumisikidzwa sepamberi kwekushambadzira kwakabatana kunowanikwa neSpam. Vakaremara account. Ndakavimbisa uye yaenda.
Vhiki rapfuura, pamwe wakanzwa hombe "kuita" nezve Shoemoney kudonhedzwa kubva kuMyBlogLog pashure iye akaisa maDhisirwo ID emamwe mitezo pane yake saiti… Chakakanganiswa nemhando yekuvanzika yeMMBL. Shoemoney kubvira adzorerwa mushure memutsamba kubva kuMBL pane yavo blog nezve chiitiko ichi uye nekudzokera shure.
Heino kutora kwangu. Handina chandinopesana naShoemoney uye ini handina kana chinhu chinopesana neMyBlogLog. MyBlogLog chave chiri chikomborero kublog rangu uye nevamwe kwekufumura kwavakawana kwatiri. Zvisinei, ndingati izvi… ndinotenda pachokwadi kuti pakadonhedzwa Shoemoney, zvaive nekuti MBL ainetsekana nezvevamwe vevabloggi sezvo Shoemoney akatanga kutumira maID matatu uye ndokuwedzera mamwe
Handitendi izvozvo MBL anga aine sarudzo… Shoemoney aizoenda kupi? Aizoisa zana here kunze uko? Chiuru? Aive anyora imwe mhando yeSQL jekiseni script kwaairodha pasi dhatabhesi rezvitupa? MBL zvirokwazvo havana kuziva saka vakamugura… nekukurumidza. Izvo zvaive zvakanaka kwatiri tese.
Izvo zvaive zvisiri zvekuranga Shoemoney, zvaive zvekutidzivirira. Icho hachisi chinhu chakanaka here? Handizvo here zvatiri kuda? Mukati meawa imwe chete, mutengesi akatanga kuzvidzivirira uko kungave kwakakanganisa kurwisa kwekuchengetedza.
… Dzokera kuSkidoo, Shoemoney - ndokumbira utarise:
Ndakamhan'arira nyaya kukambani uye ndakavapa nguva yekupindura nekuita. Ndakagamuchira email yekusimbisa iyo yakanditenda nekuvaunza kwavari, vakaongorora nyaya yacho, uye vakavimbisa kuigadzirisa nenzira yakakodzera. Pandakasvika kumba nhasi, ndakatarisa uye mushandisi uye malenzi avo akange aenda.
Uine izvozvo mupfungwa, kana iwe ukawana gomba rekuchengetedza kana kuburitsa nechigadzirwa, iwe une chikwereti kune vamwe vako vashandisi kuti vataure ruzivo irworwo panguva yakakodzera uye uvape nguva yekuita. Kufungisisa zviri 20/20, asi ndingadai ndakaremekedza Shoemoney zvakanyanya dai ndanga ndaverenga pane iyo Kushambadzira Pilgrim blog iyo Shoemoney yaakashanda neMyBlogLog kuvhara gomba rekuchengetedza husiku hwapfuura.
Shoemoney aigona kunge akataura nezve budiriro, sezvazvinogona MBL uye ivo vangadai vese vakataura kuti kubva panguva yekuburitswa kusvika panguva yekugadziriswa yaive isingasviki awa rimwe. Kana vakasazvibata, saka zvinyatsovadya! Asi usatumire iwo maburi, uvabate, uye mirira kuti uone zvinoitika. Izvo zvinotyisa kune wese munhu.
Nekumhan'ara nyaya uye nekumirira mhinduro, zvingadai zvakakonzera kusagadzikana zvakanyanya, kudzivisa kuramwa basa, kudzivirira magazioni kutaura kumablog akawanda, uye kungadai kwakachengetedza vashandisi kubva kuID yavo iratidzirwe… kukunda kune wese munhu. Ndingadai ndatenda Shoemoney uye ndingadai ndatenda MBL. Zvinenge zvaratidza kuti vese vari kutsvaga kunze kwako neni.
Ah hongu ... ndatenda, Gil (kubva Squidoo). Kutenda, Seti! Ndinoyemura iwe kutora nguva kuti ugadzirise iyi nyaya uye kutarisa kunze kwedu tese.
PS: Ini handisi kutsvaga yemurazvo hondo kuti itange. Ini ndinoremekedza Shoemoney - iye ane masimba masimba eblogga ane anoshamisa anotevera. Ane tarenda uye ave achibudirira kwazvo. Ndinovimba kuve nehafu yekuburitswa kwaakambove nezuva rimwe. Ini ndinongoda kuisa maonero angu kunze uko uye ndinovimba anofungisisa nzira yacho kana chimwe chinhu chakadai chikaitika mune ramangwana. Pasina mubvunzo achawana zvimwe zvinongedzo nezvimwe zvinoshandiswa… ndinotarisira kwaari kubatsira mukuchengetedza isu tese!
Chii chakaitika pabhavhadhe rako?
Wepamusoro 3 Zvimiro zvisipo kubva kuGoogle Blog Tsvaga?
Kukadzi 26, 2007 na8: 06 PM
Ini handiwanzo kutora chikamu mumoto wemoto ... yakawandisa yenguva yekunyura uye kwete yakawanda purofiti mune iyo =)
Kupotsa kwako kwakawanda nhoroondo uye zvinhu zvinoitika kuseri kwezviitiko asi iyo mybloglog chinhu chaive svondo rapfuura 😉
Kukadzi 26, 2007 na8: 10 PM
Kutenda nekushanya! Ndinonyatsozvikoshesa uye wakanyatsotaura - ndinongova wechitatu kune izvi saka maonero angu anogona kunge ari kunze kwekushaya.
Ini ndinonyatso kukoshesa chokwadi chekuti hautore chikamu muhondo dzemoto, ndinoremekedza mabloggi ayo anodzivirira makakatanwa (uye zvirokwazvo haisi iyo pfungwa yeiyi).
Ini ndinongotarisira kumberi kutaurirana pakati pezvigadzirwa nevanhu, kuburitsa mablog uye mapurpiti anodheerera nenzira kwayo, uye kupa vanhu mukana wekusahadzika kuti vaite zvakanaka.
Iwe wakachekerera MBL zvakanaka kwechinguva ipapo. Ndinovimba zvinhu zvagadziriswa.
Ndatenda zvakare nekushanya! Ndinovimba unodzoka.
Kukadzi 26, 2007 na11: 05 PM
Iye murume anogona kuverengerwa seakanyanya kupusa kukanganisa. Izvo zvinhu zvidiki izvo zvatisingafunge nezvazvo dzimwe nguva zvinodzoka kuzotitambudza. Hapanazve kumwe kutaura nekuda kwehupenzi hwakabatanidzwa ...
Kukadzi 27, 2007 na8: 23 PM
Pfungwa yakanaka iwe yawakagadzira ipapo!